Ramadaanta iyo Ramadkeeda!(9aad) – Diyaarintii: Guuleed Cumar Madar - Somaliland Post
Home Maqaallo Ramadaanta iyo Ramadkeeda!(9aad) – Diyaarintii: Guuleed Cumar Madar
Ramadaanta iyo Ramadkeeda!(9aad) – Diyaarintii: Guuleed Cumar Madar
Waxa foodda inagu soo haya tobankii gabo-gabada u ahaa bishan barakaysan ee Ramadaan , Tobankan oo ah tobanka dambi dhaafka .
Xadiis ay rasuulka (N.N.K.H) ka soo gudbisay asxaabiyadii ahayd xaaska rasuulka ee “Caa’isha” ayaa waxa ay tidhi:( waxa uu ahaa rasuulku(N.N.K.H) marka ay soo galaan tobanka uugu dambeeya bishan Ramadaan : mid nooleeya habeenkii,baraarujiya ehelkiisa,guntigana dhiisha iskaga dhiga) .Oo ah in uu habeenkii oo dhan u taagnaan jiray salaad iyo duco, ehelkiisa oo ay uugu horreeyaan dumarkii rasuulkuna uu baraarujin jiray, oo ay sii libin-laabi jireen dadaalkii ay ku jireen bisha inteedii kale .guntigana wuu adkaysan jiray.
Waxa ka mid ah tobankan dambe ee bishan barakaysan ,habeenka uu Alle (S.W.T) Ku sheegay Qur’aanka kariimka ahi in uu soo dagay.Habeenkaas oo uu ku magacaabay Alle(S.W.T) in uu yahy” Habeenka Qadriga”.
Waa habeenka hadii aad halleesho uu Alle (S.W.T) kaa dhaafayo dunuubtii aad hore u soo fashay.
Waa habeen barakaysan sida uu Alle (S.W.T) Ku xusay Qur’aanka kariimka ah, Waa habeen ka khayr badan (1000) kun bilood ,Oo u dhiganta 83 sanno iyo waliba billo.
Waa habeen ay soo dagaan malaa’igtu sida uu Alle (S.W.T) ku xusay Qur’aanka kariimka ah, Waa habeen daggan oo xasilloon amnina ah , oo ciqaabta iyo cadaabkuba yaryahay , waayo? Addoomaha oo dhami habeenkaa waxa ay ku hawlan yihiin xusitaanka Alle (S.W.T) iyo cibaadaddiisa.
La iskuma raacsana habeenkani in uu yahay habeenka 27 labaatanaad , sida ay soomaalidu aaminsantahay , Walaal waxa fiican in aynu dhamaan tobakan dambe dadaalno oo aynan habeen kaliya ku gaabsan , inta kalena aynaan ka jiifan.
Waxa mudan in aynu habeenadan uugu dambeeya bishan barakaysan ka sii badino dadaalkii aynu soo wadnay intii hore ee bishan barakaysan, inaga oo ka tusaale qaadanayna rasuulkeena (N.N.K.H) sida uu u dadaali jiray bishan barakaysan guud ahaan iyo tobankan uugu dambeeyaba.
Rasuulku (N.N.K.H) habeenkii oo dhan salaad iyo duco ayuu u taagnaan jiray marka ay bilaabmaan tobankan dambe , Ehelkiisa waa uu baraarujin jiray .Waxa uu giijisan jiray rasuulku guntigiisa , oo ay culimadu ku maceenyeen , in uu sii libin-laabi jiray dadaalka.Waxa kale oo ay ku maceeneyeen culimada salafku Weedha ah in uu rasuulku gutiga giijisan jiray tobanka dambe, in uu masaajidka u badnaa oo aanu u tagi jirin dumarkiisa .
Rasuulku(N.N.K.H) cunnada cashada uu cuni jiray bisha inteeda hore , marka ay bilaabmaan tobanka dambe , cashadiisa dib ayuu u dhigi jiray oo waa uu ku suxuuran jiray, sida ay xadiis ku soo warisay Hooyadeen Caa’isha.
Rasuulku(N.N.K.H) waa uu maydhan jiray habeenka kasta oo ka mid ah habeenada tobanka dambe ee bishan barakaysan ee Ramadaan labada aadaan dhexdooda , Oo loola jeedo : Eedaanka maqrib iyo eedaanka cashaa’i.
Rasuulku(N.N.K.H) Tobankan dambe ee bishan barakaysan waa uu ” ictikaafi” jiray , isaga oo masjidka ka dhigan jiray hoygiisa kuna sugnaan jiray maalin iyo habeenba.
Ictikaafku waa : in aad naftaada xabsi uuga dhigto masaajid ka mida masaajidada Alle (S.W.T) adeecida Alle(S.W.T) iyo xuska Alle(S.W.T) aad joogtayso ,Oo aad naftaada ka goyso dhamaan wax kasta oo kaa mashquulinaya ,Qalbigaaga iyo qoloftaadaba waa in aad u soo jeediso xuska Alle (S.W.T) ,Iyo waxa aad Alle (S.W.T) uugu dhawaanayso inaad fasho. Waxa aad ka dhaxli cibaadaddan hadii aad fasho , in aad ilaahay u hoggaan sanaato waqti kasta.
Hadaba dhamaanteen aynu is toosinno , oo aynu dadaalkii sii badinno aynu soo wadnay intaynu ku gudo jirnay bishan barakaysan ee Ramadaan.
Baraarujinta ha laysla ogaado , xaaskaaga , ehelkaaga , walaalahaa , waalidkaa . jaarkaaga , asxaabtaada , ku baraaruji in aad waqti kasta cibaadaysataan , oo aad Alle (S.W.T) u hogaansanaataan, Aqoon intan ka faro badan raadsada , oo aad ifka iyo aakhiraba ku liibaantaan…..La soco qaybta dambe .
Qalinkii:Guuleed Cumar Madar .